AMBILOBE : Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny Polisy nasionaly sy Polisy monisipaly
Fanomezana vahana ny zana-kavana. Niverina indray ny fifanolanana eo anivon’ny Polisy nasionaly sy Polisy monisipaly ao Ambilobe, nanomboka ny alahady 8 oktobra maraina lasa teo. 12 octobre 2017
Azo ambara fa mihenjan-droa tanteraka ny tady eo amin’ny roa tonta na dia efa nisy ny fandaminana taloha teo.
Araka ny fampitam-baovao marim-pototra voaray avy any an-toerana dia nidiran’ny Polisy nasionaly miisa efatra izay notarihin’ny kaomisera lefitra ny toby misy ireo Polisy monisipaly ao Ambilobe, ny alahady lasa teo.Araka ny voalaza dia nirongo fitaovam-piadiana ireo Polisy nasionaly ireo tahaka ireny manao fampisehoan-kery ireny. Voalaza ihany fa naka an-keriny ilay tovolahy voatazona tao amin’ny polisy monisipaly ireto farany.Raha tsiahivina dia nisy zazalahy nanimba zavatr’olona tamina trano fandihizana iray tao Ambilobe, ny alin’ny sabotsy teo.
Voatery nitory ny tompon’ilay trano fanaovana alim-pandihizana ity ka nahasamborana ilay tovolahy nahavanon-doza. Mahavantana kokoa ny olona any an-toerana ny mametraka fitoriana amin’ny Polisy monisipaly raha misy trangam-piarahamonina satria dia tsy miandry ela izy ireo mandray andraikitra tahaka ny nahasamboran’izy ireo ireo foroches nanomboka nampahory an’Ambilobe. Araka izany dia voatazona tao amin’ny Polisy monisipaly ilay ranamana nanimba zavatr’olona ity. Sendra mpiandry raharaha no tao amin’ny tobin’ireto farany, ka nanamora ny fidirana an-keriny nataon’ireo polisy nasionaly tamin’izany.
Araka ny fanampim-baovao hatrany fa fianakavian’ny lefitra kaomisera ity tovolahy voatazona ity, ka nisy ihany koa ny fandrahonana tamin’ny basy teo amin’ny fihorifan’ireo mpiandry raharaha.
Tsiahivina fa tsy vao sambany no misy fidirana an-keriny ataon’ny Polisy nasionaly maka izay voatazona ao amin’ny polisy monisipaly ao Ambilobe ity ary efa nisy fandaminana nefa izao niseho indray. Tsy fantatra mazava inona marina ny olana misy amin’ny roa tonta, izay samy mitady hifikitra andraikitra. Iza àry no tokony handefasana fitoriana atain’ireo vahoaka raha misy ilana izany ? Ny ao Ambilobe tsy dia mametraka fitokisana amin’ny Polisy nasionaly loatra, ka mandefa ny fitarainany amin’ny Polisy monisipaly. Henjan-droa ny tady amin’ny roa tonta amin’izao fotoana. Andrasana araka izany izay mety ho tohin’ity raharaha ity ary hotaterina eto amin’ny manaraka.